Qisada Abraar Jibriil: Qareen iyo sharci yaqaan dhalinyaro soomaali ah - NorSom News
Home NorSom Magazin Qisada Abraar Jibriil: Qareen iyo sharci yaqaan dhalinyaro soomaali ah
Abraar Jibriil waa sharci yaqaan dhalinyaro soomaali ah oo dhawaan rajeynayo inuu helo leysinka qareenimadda ee maxmadaha Norway. Abraar oo kamid ah dhalinyarada soomaalida ah ee ku dhashay, waxna ku baratay Norway ayaa wareysigan hoose uga sheekeynayo qisada noloshiida, isaga oo ku dashay tuulada Ålgård ee gobolka Rogaland ilaa uu qareen la yaqaan ka noqday.
Abraar ayaa wareysigan sidoo kale talooyin ku saabsan waxbarashada iyo suuqa shaqada la wadaagayo dhalinyarada soomaalida ah ee Norway ku nool.
Wareysigan wuxuu kamid yahay barnaamijka qisooyinka soomaalida Norway oo ah barnaamij ay soo wada saareen xarunta cilmibaarista ee Future Center iyo warbaahinta NorSom News.
Horey waxaan u wareysanay Haaruun Siyaad oo ah wiil soomaali ah oo katirsan booliska Norway.
Previous articleNorway: 90.000 qof oo laga caawin doonto biilka korontada.
Next articleSolberg oo lagu heysto boos shaqo oo ay siisay mid kamid ah wasiiradeeda: Su´aalo weydiin furan